Fanahy Kalifornia iray - Matokia ny reninao - Countdown to the Kingdom
Tamin'ny 4 aogositra 2020, ity fanahy any Kalifornia ity dia "nahita" ny laharana 503 tamin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 21 Oktobra 1993 tany Jakarta-Cisarua, Indonezia momba ny Solon'ny Fanjakan'i Kristy Mpanjaka mandritra ny fanatanjahan-tena amin'ny endrika ara-panahy amin'ny endrika cenacle miaraka amin'ireo pretran'ny MMP avy any Indonezia:
Manana fahatokiana sy fanantenana lehibe
Faly er I aho mahita anao eto, mivory miaraka amin'ny fivoriana fitohizan'ny vavaka sy firahalahiana, pretra avy amin'ny Hetsika avy any amin'ny faritra rehetra eto Indonezia. Mampiray amin'ny vavanao aho; Izaho dia manampy anao mitombo amin'ny fitiavan-drahalahy; Mahazo ireo fahasoavana avy amin'ny Tompo aho ho anao, izay mahatsara ny asa fanompoana ataonao. Ary maniry aho anio mba hanome hafatra feno fahatokisana sy fanantenana anao, izay hiaraka aminao amin'ny dianao sarotra.
Matokia ny Reny any an-danitra izay akaiky anao indrindra, ho fanampiana sy fampiononana ho anao amin'ny fisoronana. Hitako ireo olanao tsy tambo isaina. Raisiko ny fiarahabana anao rehetra Akaikiko aminao ny hampahery anao amin'ny maha-irery anao. Manome anao fifaliana sy fampiononana aho na dia ao anatin'ny fangidiana be aza. Aza mahatsapa ho irery. Na dia maina sy sarotra aza indraindray ny sehatry ny mpivadi-pinoana; na dia ny fiarahamonina manodidina anao aza dia mametraka vato misakana amin'ny asan'ny pretra anao; na dia mavesatra anao aza ny lanjan'ny fahalemen'ny olombelona, ​​aza kivy! Izaho dia eo akaikinao foana, amin'ny maha Mama mahay sy mahatakatra ahy sy manohana sy mitarika ary mampahery ary mampahery anao. Manangona ny ranomasonao toy ny firavaka sarobidy aho, ary tiako ny harerahanao ao amin'ny tsiambaratelon'ny foko tsy mahafaty.
Manàna fanantenana lehibe amin'ny fandresena feno an'Andriamanitra ho an'ny olombelona mahantra, marary sy lavitra azy. Miaina mandritra ny taona maharary amin'ny fotoam-pahoriana lehibe ianao ary mihakely isan'andro ny fahoriana. Mandany fotoana izao any Getsemane amin'ny Foko tsy manam-petra ary apetraho amin'ny tenanao ny sitrapon'ny Rainao any an-danitra. Aoka ho vavolombelon'ny finoana amin'izao fotoan'ny fivadiham-pinoana lehibe izao. Aoka ho vavolombelon'ny fahamasinana amin'izao andro feno fahagagana izao. Aoka ianao ho vavolombelon'ny fitiavana ao amin'ny tontolo iray izay nanjary mafy sy tsy be fo, levona ary ringana noho ny egoisma, fankahalana, herisetra ary ady. Ento hatraiza hatraiza ny balsoman'ny fitiavako sy ny famindram-pon'ny reny. Ento any an-tsofin'ny pretra ny zanako izay nivily, ireo lavitra, ny mahantra, ny malemy, ny marary ary ny mpanota, ka ampidiro ho azy ireo ao anaty valan'ny ondriko tsy azo antoka.
Mivoaha amin'ity tranobenim-pifaliana ity am-pifaliana. Miverena soa aman-tsara any an-tranonareo am-pilaminana ary ho tonga apôstôly momba izany, ny Fihetsika ataoko, amin'ny faritra rehetra amin'ity firenena lehibe ity. Miaraka aminao, sy amin'ireo malalanao ary mahatoky izay nankinina taminao, dia mitahy aho ankehitriny i Indonezia sy ny Fiangonana izay miaina, mijaly ary miasa eto, mba hampidirin'i Jesoa Zanako amin'ny fanomezana rehetra ny fitiavany, ny fiainany sy ny fiadanany.
← Jennifer - Mifohaza ny zanako!
Gisella Cardia - Hatao… →